हृदयघात के हो, कसरी बच्ने? :: प्रेम राज वैद्य :: Setopati
हृदयघात के हो, कसरी बच्ने?
डा. प्रेम राज वैद्य काठमाडौं
हृदयघात अर्थात Heart Attack भनेको मुटुको कुनै पनि धमनीहरूमा सतप्रतिशत अवरोध भई मुटुको मांसपेशीले काम गर्न नसक्नु र अन्त्यमा सो भागको मृत्यु हुनु हो। यो हृदयघात यदि मुटुको देब्रे मुख्य धमनीमा अवरोध भएमा प्राणघातक पनि हुन सक्छ भने साना साना धमनीहरुको अवरोध भएर भएको हृदयघात कहिले काँही मानिसलाई थाहा नहुन पनि सक्छ।
तर ठूलो धमनीमा अवरोध भएमा छातिको बिच वा देब्रे तिर बेस्सरी थिचेको जस्तो दुख्छ, चिट चिट पसिना आउँछ, वाक वाक लाग्ने र बेहोस पनि हुन सक्छ।
उच्च रक्तचाप, मधुमेह र कोलेस्टेरोललाई समयमानै नियन्त्रणमा राख्न सकेमा ५०५ हृदयघात कम हुनसक्छ। मोटोपन कम गर्ने व्यायाम नियमित गर्ने, मानसिक तनाव हुन नदिने, जीवन शैलीमा सुधार ल्याउने हो भने समयमानै यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मुख्य भूमिका जनचेतनाको कमि र यो रोगका साधारण लक्षणहरू मात्र हुने हुनाले समयमानै यो रोगको निदान गर्न निकै कठीन भएको हो।
हृदयघात हुनुभन्दा अगाडि यसको साधारण लक्षण मात्र हुन्छ। जब व्यायाम गर्दा, उकालो चढ्दा, भर्याङ उक्लदा, मानसिक तनाव बढ्दा छातिको बिचमा वा देब्रेतिर भारी हुने, ढुंगाले थिचे जस्तो अनुभव हुने, स्वाँ स्वाँ बढ्ने तर आराम गरे पछि सन्चो हुने। कहिले काही देव्रे हातमा वा च्यापूतिर पनि दुखाई सरेको जस्तो पनि हुनसक्छ।
यदि यस्तो लक्षण देखा परेमा तुरून्त मुटुरोग विशेषज्ञको परामर्श लिनु जरूरी छ। अधिकाशं मानिसहरु यस्लाई सामान्य सोचेर घरमै बसिरहन्छन् र अन्त्यमा हृदयघात पनि हुनसक्छ। हृदयघात भइसकेपछि उपचार सहज हुँदैन। देव्रे मुख्य धमनीमा अवरोध भएमा समस्या झनै जटिल हुन्छ। किनकी पहिलो हृदयघातमा नै मृत्युसम्म हुन सक्छ ।
तसर्थ वयस्कहरुले कमसेकम एक पटक आफ्नो मुटुको परीक्षण गर्नु अति आवश्यक छ। मुटुमा समस्या देखिएमा नियमित जाँच गर्नुपर्छ। किनकी हालसम्म हृदयघातको मुख्य कारण थाहा छैन। तर यस्का कारक तत्वहरु मात्र थाहा छ।
हामीले परिवर्तन गर्न नसक्ने कारक तत्वहरुमाः
उमेर – जती उमेर बढी छ खतरा त्यतिनै बढी हुन्छ।
पुरूष – पुरुषलाई बढी हृदयघात हुन्छ भने महिलालाई महिनावारि बन्द भएपछि पुरूषलाई जतिकै हुन्छ ।
बंशाणुगत – बंशाणुगत हुने रोगमा पर्दछ।
जाति – दक्षिणपूर्वी एसियामा बढी हुन्छ।
परिवर्तन गर्न सकिने कारक तत्वहरुमाः
कसरी थाहा पाउने मुटुको धमनीको अवरोध?
यदि माथि उल्लेखित लक्षण देखिएमा तुरून्त Rest ECG (Electrocardiogram) गर्नुपर्छ। यदि ECG मा केही समस्या देखा परेमा वा देखा नपरे पनि Exercise ECG = TMT ( Treadmill Test ) वा Stress Echocardiography गर्नुपर्ने हुनसक्छ। TMT - POSITIVE भएमा CAG (Coronary Angiography) गर्नुपर्छ। यदि TMT गर्न नसक्ने अवस्थामा वा TMT - NEGATIVE भएमा पनि मुटुको धमनीको रोगको लक्षणहरु छन भने CAG गर्नुपर्छ । CAG बाट मात्र कति अवरोध छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ । hallium test र Stress Echocardiography बाट हृदयघात भएपछि Myocardium viability हेर्न सकिन्छ। आजकाल CORONARY CT ANGIOGRAPHY बाट Calcium score र अवरोध पनि हेर्न सकिन्छ।
जब मुटुको घमनी ७०% भन्दा बढी अवरोध भएमा यस्लाई ANGIOPLASTY अथवा CABG (CORONARY ARTERY BYPASS GRAFING) गर्नुपर्छ।यदि ७०% भन्दा कम अवरोध भएमा नियमित जाँच र औषधि सेवनका साथै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।
हाल मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मुटुको वयस्कहरुको सवै प्रकारका उपचार तथा शल्यकृया शुरु भैसकेको छ। चाडै नै क्याथ ल्याब पनि सुरु हुदैछ । नेपाल सरकारबाट विपन्न नागरिकले पाउने सुविधा पनि छ, भल्बको शल्यकृया निःशुल्क गर्न पहल हुँदैछ। निकट भविष्यमा मुटु र फोक्सोको प्रत्यारोपणको तयारी हुँदैछ। तर जनशक्तिको कमी र विरामीको चाप अनुसार अस्पताल भवनको क्षमता कम भएको हुनाले नेपाल सरकारले जनशक्ति र ठूलो ठाउँ उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको छ।
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरका कन्सलट्यान्ट कार्डियोभास्कुलर सर्जन वैद्य सँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ७, २०७५, १०:१३:००